Halka caawimo lagu helo – Littsint
Haddii aad jeclaan lahayd caawimo badan oo maaraynta cadhada ah, la taliyayaasha waalidka ee Norway waxaa lagu tababaray “Hagida iyo Maaraynta Cadhada ee Waalidka”, kaas oo lagu soo bandhigay e-book. Xarumaha la talinta Waalidka waxya bixiyaan kullmada waalidka, oo waxaa loola soo xidhiidhi karaa toos gudbin la’aan.
Waxaad ka heli kartaa Xarunta La talinta Qoyska kuugu dhow halkan
Websaydka ururka Beddelka Gabood falka (ATV) atv-stiftelsen.no, waxa uu bixiyaa muuqaalka guud halka gudaha Norway aad ka heli karto xafiisyada ATV ee bixinaya daawaynta.
Xarunta Brøset ee websaydka muddanaha, sinnemestring.no, waxay bixisaa muuqaalka guud halka gudaha Norway aad ka heli karto kullmada daawaynta.
Dinutvei.no waa madashada shabakada qaranka ee dagaalka ka dhaca xidhiidhada dhow, kufsiga iyo weerarada kale ee galmada. Madasha waxaa wada Xarunta Noorwayjiyaanka ee rabshada iyo Daraasadaha Dhacdooyinka Naxdinta reeba (NKVTS) iyagoo metelaya Wasaaradda caddaalada iyo Amniga bulshadda.